Toeram-piompiana roapolo no manararaotra ny asa fitoriana amin'ny oram-panala China Manufacturer
Description:Roof Gutter Deicing Kit,Toeram-pandehan'ny hafanana matevina,Roof Gutter Deicing Mat
Home > Products > Fihetseham-pandrefesana ny fitrandrahana Snow systerm > Fihirana hafanana mafana amin&#39;ny fiarovana ny saha > Toeram-piompiana roapolo no manararaotra ny asa fitoriana amin&#39;ny oram-panala
Ny horonantsary fantsom-pofona matevina dia indrindra indrindra amin'ny Snow Melting Mat, Anti-Freeze, mampihena ny risika sy mamonjy fotoana amin'ny alàlan'ny fanorenana rafitra ririnina sy ranomandry eny am-pidinanao, làlana, tafo na ratra, ranomandry miparitaka manodidina ny rameva, bozaka, fitaovam-pandrefesana amin'ny alàlan'ny ranomandry, alim-borona, alam-baravaran'ny alikaola, fantsom-bozaka fanenonam-bozaka, fantsom-bozaka fanala, Tafio-drivotra matevina ny kitapo fisakafoana, flat.metal tafo fanakanana, diy roof de-icing, teknôlôjia ara-teknôlôjia ny sisin'ny rafitra fisakafoana, mora tandrify ny fonosana, mamontsina ny lanezy eo an-tampon-trano, manakana ny fahasimbana ho an'ny tranonao, Fitaovana hafanana hafanana ho an'ny fantson-trano. Azo atao ny manamboatra sy mivezivezy. Mora ny manadio sy portable.we dia matihanina sy mpitarika Sinoa mpanamboatra sarimihetsika hafanana, safidy manokana (ohatra: singa SMT, cable sy connectors flex) afaka manome ny vahaolana tonga lafatra izay mety hampihena ny fivoriana potoana sy hampitomboana ny vokatra. Manao endrika isan-karazany amin'ny endrika famolavolana, sy ny endrika samihafa. Ny fonosana ao anatin'io solaitra io ihany dia azo atao sy mifantoka amin'ny fitazonana ny fifamoivoizana, miandrandra ny fiaraha-miasa.
Miaraka amin'ny fifandraisana indroa
Mpitaingina tokana miaraka amin'ny screen
Tena maina miaraka amin'ny 2.6 mm
Fiarovana azo antoka ho an'ny toerana mena
Vonona 25years manoloana ny tsy fahampian'ny vokatra
Roof Gutter Deicing Kit Toeram-pandehan'ny hafanana matevina Roof Gutter Deicing Mat Heating Roof Snow Deicing Kit Roof De-Icing Film Roof De Icing Products roof de-icing heat film Tortoise Starter Kit